Ifulethi lophahla le-Quaint endaweni ematasa yasedolobheni - I-Airbnb
Ifulethi lophahla le-Quaint endaweni ematasa yasedolobheni
Ukufihla indawo endaweni yasedolobheni enokuthula. I-Quaint 1 ikamelo lokulala elinokukhanya okuhle kwesithombe se-instagram esikahle kakhulu. Jabulela ikhishi lesimanje elisanda kulungiswa elinovulande wangasese ukuze ujabulele umoya opholile wasemini. Uhambo olufushane oluya empilweni yasendaweni yasebusuku yamathilomu e-hip, ibha ka-Ed ethandwayo, indawo yokudlela esanda kuvulwa yompheki u-Lance Seeto 's Kanu kanye nebhishi eliseduze namachibi. Ukugibela ibhasi imizuzu engu-20 ukuya esikhumulweni sezindiza kanye nemizuzu engu-10 yokuhamba ngebhasi ukuya edolobheni kanye nezinkanyezi ezingu-5 zokuvakasha ehhotela e-Denarau Island.
Indawo ekhanyayo enomoya nokunethezeka kwekhaya elikude nasekhaya. Leli fulethi lihlanzekile, lisesimweni futhi linethezekile ukuze ukwazi ukuphumula nje. Ungakwazi ukufinyelela konke obungaba nakho ekhaya ukuze ukwenze kube indawo yokuhlala ethokomele. Ukuvakasha kulula ukusuka kule ndawo emaphakathi futhi kungcono nakakhulu ukuthi ufike ekhaya esidlweni esiphekiwe sasekhaya ne-Netflix ku-smart TV yakho.
Itholakala endaweni ematasa kakhulu yendawo yase-Nadi. I-Martintar iyinhliziyo yedolobha lesango laseFiji. Ukuthula nokuvikeleka, kuyilapho nje uhamba ngezinyawo kuma-cinemas endawo, izimakethe ezinkulu, amathilomu, izindawo zokudlela kanye nokuzijabulisa kwasebusuku. Ukuhambahamba emgwaqeni oyinhloko kuhlotshiswe nge-tropical greenery nama-bougainvilleas. Maphakathi ngokwanele ukuba ube kude nakho konke kodwa ube kude nendawo enokuthula nenhlonipho, ujabulele okungcono kakhulu kwezindawo zombili njengomuntu wendawo.
Umndeni wethu uhlala kwelinye lamafulethi amaningana asendlini futhi ungafinyelelwa ngocingo noma mathupha nganoma yiluphi usizo noma imibuzo ongase ube nayo.